Typography Terminology: Apex ka Swash na Gadzook N'etiti | Martech Zone
Ihe odide na-adọrọ mmasị m. Nkà nke ndị na-esepụta ụdị mkpụrụedemede pụrụ iche ma nwekwaa ike igosipụta mmụọ bụ ihe enweghị atụ. Ma gịnị mejupụtara leta? Diane Kelly Nuguid chịkọta akwụkwọ ozi mbụ iji nye nghọta n'akụkụ dị iche iche nke leta na ndenye ihe ederede. Pịa na ya iji hụ echiche zuru ezu.
Tags: ngweapexaak azuokokoosisiogwe akarigobọọlụ ọnụmmanyaakwukwo ndunnukwu efereokpukpucounterobenwaDiane Kelly Nuguidntịemefont akụkụederedeụkwụgadzookJanie Klievernkwonkwokerningeduụkwụogologo akaraakaakụkụ nke a fontenweghị serifserifubuazuokokoosisiọrịa strokswashỌnụngwa ngwaederedetypography okwunkowatypography teminolojiokwux-elu